DJ Avicii ရဲ့ သေဆုံးမှုမှာ ပြစ်မှုမလွတ်ကင်းတာမျိုး မတွေ့ရှိရဘူးလို့ ရဲတပ်ဖွဲ့ပြောကြား
22 Apr 2018 . 2:43 PM
“Wake Me Up” နဲ့ “Levels” တို့လို နာမည်ကြီးသီချင်းတွေကို ထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ ဆွီဒင်လူမျိုး Avicii ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ သောကြာနေ့က Oman၊ Muscat မှာ သေဆုံးသွားခဲ့ပါပြီ။ နာမည်ရင်းက Tim Bergling ဖြစ်ပြီးတော့ သေဆုံးချိန်မှာ အသက် ၂၈ နှစ်သာရှိပါသေးတယ်။
သေဆုံးရတဲ့ အကြောင်းအရင်းကို မဖော်ပြထားခဲ့ပေမယ့် Oman ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ ပြောကြားချက်တွေအရ သေပြီး စစ်ဆေးချက်များမှာ ပြစ်မှုပိုင်းဆိုင်ရာ မလွတ်ကင်းတဲ့ သေဆုံးမှုမျိုး မတွေ့ခဲ့ရဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ Avicii ဘက်က လူတွေကတော့ ဒီကိစ္စကို ဘာမှ ပြောကြားခြင်းမရှိပါဘူး။
သူ့ရဲ့ ရုပ်အလောင်းကို ဆွီဒင်ကို ဒီတစ်ပတ်ထဲ ပြန်ပို့မှာ ဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့ ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေနဲ့ မိဘတွေတော့ အရမ်းကို ကြေကွဲဝမ်းနည်းနေကြပါတယ်။ သူသေဆုံးတဲသတင်းဟာ တကယ့်ကို လူတွေကို တုန်လှုပ်စေခဲ့ပြီး အထူးသဖြင့်တော့ သူ့မွေးရပ်မြေဆွီဒင်နဲ့ ဥရောပတိုက်မှာရှိတဲ့ သူ့ပရိသတ်တွေအတွက်တော့ အရမ်းကို ကြေကွဲစရာပါပဲ။
ကယ်လီဖိုးနီးယားမှာလုပ်တဲ့ ၂၀၁၈ Coachella ဂီတပွဲတော်မှာ နော်ဝေလူမျိုး DJ Kygo ကတော့ သူ့ဖျော်ဖြေမှု နောက်ဆုံးအပုဒ်အဖြစ် Avicii ရဲ့ “Without You” ကို တီးသွားခဲ့ပါတယ်။ “သူ Electronic Music တွေ စတီးခဲ့တာ Avicii ကြောင့်လည်း ပါပါတယ်။ သူ့ကြောင့်သာ မဟုတ်ရင် ဒီလိုနေရာမှာ ရှိနေမှာလည်း မဟုတ်ပါဘူး၊ ဒါကြောင့် Avicii လို ဂီတပါရမီရှင်ကို ဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ ဒီသီချင်းကို ဖွင့်ပါရစေ”လို့ ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။
Coachell ရဲ့ Twitter မှာလည်း Thank you, Tim ဆိုပြီး တင်ထားခဲ့ပါတယ်။
ဒါတင်မဟုတ်ဘဲ Avicii ရဲ့ မွေးရာမြို့ဖြစ်တဲ့ ဆွီဒင်၊ စတော့ခ်ဟုမ်းက Sergels Tog ရင်ပြင်မှာလည်း သူ့ရဲ့ ပရိသတ်တွေ ထောင်ချီစုဝေးပြီး ငြိမ်သက်ဆန္ဒပြုခဲ့ကြပါသေးတယ်။
A moment of silence for Tim Bergling in his hometown Stockholm. #avicii #stockholm #sergelstorg
A post shared by Eric Naess (@ericnaess) on Apr 21, 2018 at 7:40am PDT
နယ်သာလန်မှာဆိုရင်လည်း နိုင်ငံရဲ့ အရှည်ဆုံးမျှော်စင်ဘုရားကျောင်းဖြစ်တဲ့ Dom Tower of Utrecht မှာ Avicii ရဲ့ “Wake Me Up, “Without You” နဲ့ “Hey Brother” သီချင်းတွေကို ဖွင့်ထားခဲ့ပါသေးတယ်။
ဒါကြောင့် Wake Me Up ဆိုပြီး ဘာလို့ ပြန်လည်မနိုးထတော့တာလဲ Avicii ရယ်လို့သာ ပြောကြားချင်ပါတော့တယ်။
DJ Avicii ရဲ့ သဆေုံးမှုမှာ ပွဈမှုမလှတျကငျးတာမြိုး မတှရှေိ့ရဘူးလို့ ရဲတပျဖှဲ့ပွောကွား
“Wake Me Up” နဲ့ “Levels” တို့လို နာမညျကွီးသီခငျြးတှကေို ထုတျလုပျခဲ့တဲ့ ဆှီဒငျလူမြိုး Avicii ဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ သောကွာနကေ့ Oman၊ Muscat မှာ သဆေုံးသှားခဲ့ပါပွီ။ နာမညျရငျးက Tim Bergling ဖွဈပွီးတော့ သဆေုံးခြိနျမှာ အသကျ ၂၈ နှဈသာရှိပါသေးတယျ။
သဆေုံးရတဲ့ အကွောငျးအရငျးကို မဖျောပွထားခဲ့ပမေယျ့ Oman ရဲတပျဖှဲ့ရဲ့ ပွောကွားခကျြတှအေရ သပွေီး စဈဆေးခကျြမြားမှာ ပွဈမှုပိုငျးဆိုငျရာ မလှတျကငျးတဲ့ သဆေုံးမှုမြိုး မတှခေဲ့ရဘူးလို့ ဆိုပါတယျ။ Avicii ဘကျက လူတှကေတော့ ဒီကိစ်စကို ဘာမှ ပွောကွားခွငျးမရှိပါဘူး။
သူ့ရဲ့ ရုပျအလောငျးကို ဆှီဒငျကို ဒီတဈပတျထဲ ပွနျပို့မှာ ဖွဈပွီး သူ့ရဲ့ ညီအဈကိုမောငျနှမတှနေဲ့ မိဘတှတေော့ အရမျးကို ကွကှေဲဝမျးနညျးနကွေပါတယျ။ သူသဆေုံးတဲသတငျးဟာ တကယျ့ကို လူတှကေို တုနျလှုပျစခေဲ့ပွီး အထူးသဖွငျ့တော့ သူ့မှေးရပျမွဆှေီဒငျနဲ့ ဥရောပတိုကျမှာရှိတဲ့ သူ့ပရိသတျတှအေတှကျတော့ အရမျးကို ကွကှေဲစရာပါပဲ။
ကယျလီဖိုးနီးယားမှာလုပျတဲ့ ၂၀၁၈ Coachella ဂီတပှဲတျောမှာ နျောဝလေူမြိုး DJ Kygo ကတော့ သူ့ဖြျောဖွမှေု နောကျဆုံးအပုဒျအဖွဈ Avicii ရဲ့ “Without You” ကို တီးသှားခဲ့ပါတယျ။ “သူ Electronic Music တှေ စတီးခဲ့တာ Avicii ကွောငျ့လညျး ပါပါတယျ။ သူ့ကွောငျ့သာ မဟုတျရငျ ဒီလိုနရောမှာ ရှိနမှောလညျး မဟုတျပါဘူး၊ ဒါကွောငျ့ Avicii လို ဂီတပါရမီရှငျကို ဂုဏျပွုတဲ့အနနေဲ့ ဒီသီခငျြးကို ဖှငျ့ပါရစေ”လို့ ပွောကွားသှားခဲ့ပါတယျ။
Coachell ရဲ့ Twitter မှာလညျး Thank you, Tim ဆိုပွီး တငျထားခဲ့ပါတယျ။
ဒါတငျမဟုတျဘဲ Avicii ရဲ့ မှေးရာမွို့ဖွဈတဲ့ ဆှီဒငျ၊ စတော့ချဟုမျးက Sergels Tog ရငျပွငျမှာလညျး သူ့ရဲ့ ပရိသတျတှေ ထောငျခြီစုဝေးပွီး ငွိမျသကျဆန်ဒပွုခဲ့ကွပါသေးတယျ။
နယျသာလနျမှာဆိုရငျလညျး နိုငျငံရဲ့ အရှညျဆုံးမြှျောစငျဘုရားကြောငျးဖွဈတဲ့ Dom Tower of Utrecht မှာ Avicii ရဲ့ “Wake Me Up, “Without You” နဲ့ “Hey Brother” သီခငျြးတှကေို ဖှငျ့ထားခဲ့ပါသေးတယျ။
ဒါကွောငျ့ Wake Me Up ဆိုပွီး ဘာလို့ ပွနျလညျမနိုးထတော့တာလဲ Avicii ရယျလို့သာ ပွောကွားခငျြပါတော့တယျ။